विपिका सिद्धान्तलाई गाँउ गाँउ पुर्याउने छौ « Bikas Times
विपिका सिद्धान्तलाई गाँउ गाँउ पुर्याउने छौ
मिति: September 15, 2018
नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाका चिन्तन र सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उदेश्यले स्थापित संस्था हो—विपि चिन्तन समाज । लोकतान्त्रिक विचार धाराका व्याक्तिहरुको सहभागितामा गठित यस समाजले विपिका विभिन्न साहित्यीक कृतिहरु र विपिका अभिव्याक्तिहरु मार्फत समाज रुपान्तरणको महान अभियानमा लागेको देखिन्छ । सानै उमेरदेखि विपिको समाजवादी चिन्तनबाट प्रभावित नेत्रप्रसाद पाण्डे हाल विपि चिन्तन समाज वालिङ नगरपालिकाको नगर अध्यक्षको रुपमा रहेका छन् । दुई कार्यकाल सम्म काँग्रेस पार्टीको वडा सभापतिको जिम्मेवारी समेत सम्हाली सकेका पाण्डे दर्जनौ संघसंस्थामा आवद्ध छन् । उमेरले भर्खरै चार दशक पार गरेका पाण्डे जिल्लाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्वर ६ मिर्दिका स्थायी वासिन्दा हुन् । विपि चिन्तन समाजको उदेश्य, काँग्रेस पार्टीको गतिविधि र अन्य विषय सगँ सम्वन्धित रहेर समाजका नगर अध्यक्ष पाण्डे सगँ विकास टाईम्सका संवाददाता अमृत अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
पाण्डे जि आराम हुनुहुन्छ ? के कुराले तपाईलाई नेपाली काँग्रेसको राजनीति गर्ने प्रेरणा मिल्यो ? किन अरु पार्टीमा लाग्नु भएन ?
—धन्यवाद, नमस्कार । आराम छु । म सानै देखि विपि कोइरालाको समाजवादी चिन्तनबाट प्रभावित थिए । समाजमा हुदाखाने र हुनेखाने विचको वर्गभेद कायमै थियो । हुनेखानेहरुले हुदाखानेहरु माथी गरेको अन्याय र अत्याचार माथी त्यतीबेलाको पञ्चायती सरकारले ढाकछोप गरेको देख्दा मेरो मन मुटु पोलेर आउने गर्दथ्यो । ति तमाम बेथितिहरुका विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले खवरदारी गरेको स्मरण मलाई आज समेत ताजै छ । २०४६ सालमा म कक्षा ८ मा अध्ययनरत हँुदा घर नजिकैको काँग्रेसका नेता भोजराज अर्याललाई तत्कालिन राज्य सत्ताले टाउकाको मुल्य तोकी कारवाहि (वारेन्ट पुर्जि) गर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँबाट समेत प्रभावित भई म साधरण किसानको छोरा प्रजातान्त्रिक अवधारणा बोकेको नेपाली काँग्रेस पार्टी मै लाग्ने अठोट गरे ।
विपि चिन्तन समाज कस्तो खालको संगठन हो ? पार्टीमा पद नपाएकाहरुले खोलेको संगठन हो भन्ने आरोप छ नी ?
—यो समाज पार्टीमा पद नपाएकाहरुलाई पद पु¥याउनकै लागि खोलीएको संस्था कदापी होईन । हामी आफै पनि पार्टीमा छुट्टै पद र जिम्मेवारीमा समेत आवद्ध साथीहरुको संलग्नतामा शुरु गरिएको अभियान हो । यो समाज आफैमा सबै थोक होइन तर विपि कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद आज धरापमा परेको र उहाँले जन्माएको पार्टी नेपाली काँग्रेसमा समेत उक्त चिन्तन हराउदै गएकाले उहाँको चिन्तन जोगाउने अभिप्रायले स्थापित समाज हो । यो पार्टीको कुनै आधिकारीक भातृ संगठन पनि होइन । युवा माझ विपिको चिन्तन बुझाउन गरिएको सानो प्रयास मात्र हो । विपिको विचारलाई तमाम युवा र तरुण माझ पु¥याएर संस्थागत गराउने प्रयास हो ।
यहाँले सक्रिय राजनीतिमा कति बर्ष विताउनु भयो ? विपि चिन्तन समाज बाहेक अन्य पेशा र व्यवसाय के के मा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
—२०५१ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ वालिङ बहुमुखी क्याम्पसको इकाई उापध्यक्षबाट शुरु भएको मेरो राजनीतिक यात्रा थाहै नपाई २५ बर्ष पुगिसकेछ । पटक पटक नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रिय प्रतिनिधि, वालिङ नगरपालिका साविक ५ को दुई पटक सम्म पार्टी सभापति हुदै नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा मेरो आफ्नो बलबुताले भ्याए सम्म लागि परेको छु । राजनीतिक बाहेक मेरो पेशा व्यवसाय भनेको म औषधी व्यवसायी हुँ । विशाल फर्मा वालिङको औषधीको होलसेल विक्रेता र वालिङ स्थित वालिङ सिटी पोलि क्लिनिकको अध्यक्षको रुपमा समेत कार्यरत छु । यस बाहेक ऋद्धिसिद्धि वचत सहकारीको उपाध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघको सदस्य र रेडियो आँधीखोलाको संचालक सदस्य पदमा आवद्ध छु ।
तर गतबर्ष सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा त तपाई वडा अध्यक्ष पदमा पराजित हुनुभयो नी ? जनताले किन पत्याएनन् होला ?
— मैले राजनीतिक जिवनमा धेरै सामाजिक कामहरु गरे । सोही अनुसार मलाई पार्टीले पुनर्गठित नगरपालिकाको वडा नम्वर ६ मा वडा अध्यक्षको उमेदवार बनायो । त्यसमा मेरो आफ्नै काम गर्ने तौर तरिकाले होला मेरै नेतृत्वमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र चार जना वडा सदस्य निर्वाचित हुदै गर्दा म झिनो मतले उपबिजेतामा चित्त बुझाउन प¥यो । यो विडम्वना कसरी भयो म आफै पनि अनविज्ञ छु । म आफैले भनिरहनु भन्दा पनि त्यही मतको प्रकृतिले समेत उक्त कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
काँग्रेसको पकेट क्षेत्र मानिएको स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ बाट संसदिय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले पराजय भोग्नु प¥र्यो । यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ?
—विपिले हिजो कुनै दिनमा काँग्रेसको संगठन हेर्न प¥यो भने स्याङ्जा जाउ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो रे ! आज त्यही ठाँउमा काँग्रेसको संगठन कहि बिग्रेको छ भने पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा रहनुहुने जिम्मेवार साथीहरु पनि उत्तिकै भागिदार हुनुहुन्छ । सायद हामी सगँ कुशल नेतृत्व र संगठनकर्ताको अभाव रहयो की भन्ने मलाई लागेको छ । स्याङ्जामा विपि सगँ सगै संगठन निर्माणमा हिडेका पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई चुनावी रणनीतिमा सहभागी नवनाउनु एउटा कारण हुन सक्छ भने अर्को मुलुकमा बाम एकता भई चुनावमा जादाको परिणाम पनि हुनसक्छ । बाम एकताको असर देशै भरी पर्दा स्याङ्जा जिल्लामा पनि पर्न गयो । तिनै तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउन नसक्नुले पार्टीमा प्रतिवद्ध साथीहरुको उत्साहमा कमी आएको हो की भन्ने महशुष गरिएको यथार्थता हो ।
विपि चिन्तन समाजको अवको कार्यक्रम र योजना के छ ? यसले पार्टीलाई के सहयोग गर्छ ?
—यो विपि चिन्तन समाज वालिङ नगर समिति अव नगरका १४ ओटै वडामा कार्यसमिति विस्तार गरि गाँउ वस्तीमा समेत विपिका विचारहरु प्रवाह गर्ने, हरेक वालिङवासीहरुलाई विपिले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने÷गराउने प्रयत्न गर्ने अवको कार्यक्रम छ । यो सगै समृद्ध समाज निर्माणको अभियानमा पनि हामी सगै जोडिएका छौं । विपिका विचारहरुलाई आम जनता सामु आत्मसाथ गराउन सकियो भने देश, जनता र पार्टीलाई समेत धेरै फाईदा हुने छ । यो समाजले विपिको चिन्तन जागरण गराएर पार्टीलाई संगठन विस्तारमा सहयोग पु¥याउने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
—काम गर्नलाई कुनै पद नभएपनि कसैले छेक्दैन । अबको उपस्थिति कुन पदमा भन्ने बारे मैले हाल सम्म कुनै आधिकारीक निर्णय लिइसकेको छैन । भोलीका दिनमा पार्टीले जुन पदमा मलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन उपयुक्त ठान्छ म त्यही पदमा उपस्थित हुनेछु । त्यो साथीहरुको मुल्याङ्कनमा समेत भर पर्दछ ।
तपाईले राजनीतिमा लागेर के पाउनु भयो, के गुमाउनु भयो ?
—मैले पार्टीमा लागेर लाभको पद लिन नसके पनि सामाजिक जिवन प्राप्त गरे । त्यो नै मेरो ठुलो उपलव्धी हो जस्तो लाग्छ । मलाई पार्टीले विश्वास गरेर वालिङ नपा ६ को वडा अध्यक्ष पदमा टिकट दिएको थियो । त्यो जिम्मेवारी र उक्त पदको टिकट प्राप्त गर्नु पनि ठुलो उपलव्धी हो भन्ने लाग्छ । मैले उक्त अध्यक्ष पदको चुनावमा जनताको मत जित्न नसकेता पनि मन जित्न सकेको छु जस्तो लागेको छ । त्यो नै मेरो सफलताको प्राप्ती हो भन्ने लाग्छ । राजनीतिमा लागेर सामाजिक जिवन प्राप्त गरे र लोकतान्त्रिक संस्कार सिके त्यो नै मेरो प्राप्ती हो । गुमाउनुको हकमा खासै केही गुमाए जस्तो लाग्दैन । अलिकति निजी जिवन गुमाएकी जस्तो लाग्छ ।
जिवनमा मिस गरेको कुरा केही छ की ?
—खासै केही छैन । तथापी मैले मेरो जिवनको अध्यायलाई सामाजिक र राजनीतिक रुपमा उभ्याईसकेपछि १४ औं महाधिवेसनमा पार्टीको जिम्मेवार पदमा नबसीकन विपिको विचारलाई भने जति प्रवाह गर्न सकिएन । त्यो नै जिवनमा मिस गरेको जस्तै अनुभव हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो लाग्दैन ।
अन्त्यमा विकास टाईम्स अनलाईन मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
—विपि चिन्तन समाज कुनै गुटउपगुट र व्याक्तिको स्वार्थ सिद्धका लागि स्थापित संस्था नभई महामानव विपि कोइरालाका जिवनोपयोगी सिद्धान्तहरुलाई प्रचार प्रसार गराउन स्थापित नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो । यसलाई जिवन्त गराउन र विपि कोइरालाको समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न आम लोकतन्त्रवादी जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । जादजादै मुलुककै लोकप्रिय विकास टाईम्स अनलाईन मार्फत आफ्ना भावनाहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा अनलाईन टिमलाई आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
पाण्डे विपि चिन्तन समाज वालिङअध्यक्ष हुन
पार्टी सभापति सहभागि नुवाकोटको कार्यक्रम केसी र महतबाट बहिष्कार
नुवाकोट । नेपाली कांग्रेस नुवाकोटमा फेरि कलह देखिएको छ । नुवाकोटबाट कांग्रेसमा प्रभावशाली दुई नेता